သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: သူငယ်ချင်းသို့ ပေးစာဟောင်းလေး တစ်စောင်။
သူငယ်ချင်းသို့ ပေးစာဟောင်းလေး တစ်စောင်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈- နှစ်လောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီ ရေးထားခဲ့တဲ့ စာလေးတစ်စောင်လေးပါ်၊ ဟိုတနေ့က ပစ္စည်းတွေ ရှင်းရင်း တွေ့လို့ ဘလောက်ဂ်ထဲ တင်ချင်တာနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစာအတိုင်းနီးပါးပဲ ပြန်တင်ထားတာပါ။ အဆောင်အကြောင်းရယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းရယ်၊ ပြီး အဲဒီအချိန်က စိတ်ခံစားမှုတချို့ရယ်ပေါ့။
alettertoafriend01 - UploadaDocument to Scribd
ဒီpost လေးလည်း တင်ပြီးရော... တချို.က စာရှည်လို. သူငယ်ချင်းဆီပို့တယ်ဆိုပြီး ဘယ်လိုလုပ် ကျမဆီမှာ ရှိနေတာလဲ မေးပါတယ်။ ဟုတ်တယ်။ အဲဒီကျောင်းပိတ်တဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ကျမ သူငယ်ချင်းတွေဆီ စာတွေ အများကြီးရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်ကိုက စာရေးနေရရင် ပျော်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီစာလေးလည်း ရေးပေမယ့် မထည့်ဖြစ်ခဲ.တာ ဖြစ်နိုင်သလို နောက်တစောင် အသစ်ထပ်တည့်လိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ ကျမ လက်ရေးမပြောင်းဘူးဆိုတာကို မေးလ်နဲ. ပို.ပေးပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ လက်ရေးနဲ.ရေးတဲ.စာတွေက ရှားသွားပါပြီ။ ခုနေများတော့ သူငယ်ချင်းတွေဆီစာပို့ရင် emailတွေကို CC ခံပို.ဖြစ်တော့မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျမစာလေးကို သိမ်းထားတဲ. အဲဒီသူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်အမှတ်တရအဖြစ် ဘလောဂ်ထဲမှာ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပြန်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။
Read this document on Scribd: alettertoafriend01
Posted by tg.nwai at 11:26:00 PM
Lables, အမှတ်တရ၊, အမှတ်တရ၊ (သူငယ်ချင်း)
ဖတ် ပြီး သွား ပြီ.. နင် ရဲ့ သာမာန် စာ တစောင် က ငါ အတွက် တော့ ဝတ္တူ တပုဒ် လောက် ရှိ တယ်...ဟီး ဟီး..
သြော် တခါတရံ ဆီကလား... ဝေမျှတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး။ TG ရဲ့ လက်ရေးက တသမတ်ထဲဘဲ။
ဗေဒင်ဟောသလို ပြောရရင်တော့ ဒီလက်ရေးပိုင်ရှင်မျိုးဟာ အစွဲအလန်းကြီးမယ်။ ဇွဲသန်မယ်။ တဇွတ်ထိုးလို့ တယူသန်မယ်ပေါ့။
(ဟားဟ ဒီဆရာမ ဟောချက်တွေကတော့ လွဲဦးမယ်။)
တို့လက်ရေးကတော့ တစ်ခါရေးရင် တစ်မျိုး။ ဆိုလိုတာကတော့ သိပ် အစွဲအလန်း မကြီးတတ်ဖူးပေါ့။ ဟဲဟဲ (ဒါမျိုးဘယ်သူ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ရီတတ်လည်း မသိပါဘူး)
btw, ရန်ကုန်က နှင်းမကျတဲ့ အရပ်မို့တော်သေးတယ်နော်။ တို့အတွက်တော့ RIT ဟာ နှင်းတောထဲမှာလိုဘဲ။
ပေးစာက အရှည်ကြီးပဲ ပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုရောပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်အားနာပါတယ်။
ဒီဗေဒင်ဆရာမ သိပ်တော်တာပဲ။ ဒါတောင် ပညာကုန်ထုတ်မသုံးရသေးဘူးမဟုတ်လား။ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်တာ ဇွန်းပါတခါတည်း တပ်ပေးတ်ာမပြောနဲ့တော့နော်..ဟဲဟဲ။